शब्दकोश: October 2012
साँझ पर्दै गरेको समय । गजलकार प्रकट पगेनी 'शिव' आफ्नो गजलमा घुसेर स्वीटर बुन्न तम्सिने गुनिला नारीहरूलाई निकै सम्झिरहेछन् । बुनिएका स्वीटर खोइ कुन कुनामा छाडेर आएका छन् । उमेरमा ५५ काटेको ज्यानले साँझको सिर्सिरे बतासलाई नवयुवक झैं चुनौती दिएका छन् ।
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, October 21, 20122: Comments
सम्बोधन : ईश्‍वरको पिशाचलाई
'ढुंगा अगाडि घन्टौं बस्नुहुन्छ, के दिन्छ त्यसले ?' मैले घर बसुन्जेल आमाको पूजाविधिमाथि टिप्पणी गरेर झिंजो लगाइरहन्थें । आमाको जवाफ हुन्थ्यो - 'आफूले (पूजा) नगरे पनि यस्तो चाहिं नभन्नू काले !'
हुन पनि हो ।
कसैको मनको आस्थामा धावा बोल्नु पापै हो । कसैको मान्यतालाई भत्काउन खोज्नु अधर्म हो । धार्मिक आस्था मानिसहरुले नै रचेको मन बुझाउने मेलो हो भन्ने लागिरहन्छ सधैं । मान्छे नै हो अद्‌भूत रचनाकार । जीवनशैली सहज तुल्याउन र सामाजिक व्यवस्थापनका लागि उसले अनेक शर्त र सीमा कोरेको छ यो लोकमा । कतिपय निकै वैज्ञानिक पनि छन् । धर्म-अधर्म ईश्‍वरसँग जोडिन्छ कि जोडिंदैन थाहा छैन, तर पाप र पुन्यको भने ख्याल हुन्छ मलाई । मानवीय भाव कुतकुतिएर अन्तरमा कतै हिउँ पग्लिन्छ । तर ईश्‍वरको अस्तित्वप्रति कहिल्यै विश्वास भएन । ईश्‍वर छ भने धर्म-अधर्मको हिसाबले हुनैपर्ने कुरा किन हुन नसकेका र नहुनुपर्ने कुरा किन भएका ? हुन्छ भने झन् यति क्रूर किन हुन्छ त्यो शंकास्पद अस्तित्वको ईश्‍वर ? शक्तिको दाबी गरिने र रेखदेखको ठेकेदार मानिने ईश्‍वरले संसारमा हुने उचित-अनुचित घटनामा हिस्सेदारी त पक्कै राख्‍नुपर्ला ।
यही सन्दर्भमा गत असोज २३ गते २७ वर्षको कलकलाउँदो उमेरमा निधन भएका पत्रकार तारा रेग्मी (आरोह) को नियति र ईश्‍वरीय लीलामा मन बरालिंदा अमिलिएँ । मृत्यु सत्य हो । तर त्यसको पनि त केही नियम र अवस्था हुँदो हो, यदि ईश्‍वर छ भने । कि त ईश्‍वरको लोकमा अनुशासन सबैभन्दा घटिया कुरा हो कि ? ताराको मृत्युमा मैले आफ्नै मृत्यु पनि चाखें । नत्र अराजकता, अनियमितता र भद्रगोल खटन हुन्छ भने के को ईश्‍वर ! ईश्‍वर र मान्छेमा फरक के ? कथित दैत्य र ईश्‍वरलाई मरेको दङदङी गन्हाएका माछासरि एउटै तराजुमा किन नजोख्‍ने ? यस्तैयस्तै विकृत सोच आएर एउटा कविता लेखेको थिएँ ।
-- ईश्‍वरको पिशाचलाई --
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, October 13, 20123: Comments
Labels: कविता, प्रसङ्गवश